मधुमेहका बिरामीले ध्यान दिनु कुराहरु « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
मधुमेहका बिरामीले ध्यान दिनु कुराहरु
५ मंसिर २०७४, मंगलवार ११:५९ मा प्रकाशित
मधुमेह भएको मानिसले आफ्नो आहारामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी खाने गरेमा मधुमेह अनियन्त्रित भएर गम्भीर शारीरिक समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी कार्बोहाइड्रेट भएका खाद्यवस्तु खाँदा विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । यसमा अन्न, तरकारी मात्र होइन फलपूmल पनि पर्छन् ।
मधुमेह नियन्त्रणमा राख्न प्रत्येक छाकमा आपूmले कत्तिको कार्बोहाइड्रेट खाइरहेको छु भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । मध्यम आकारको एउटा केरामा करिब ३० ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ । यसैबाट आपूmलाई कत्तिको मात्रामा कार्बोहाइड्रेट चाहिएको छ र केरा कति खाने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ ।
अनस्याच्युरेडेड चिल्लो वा स्वस्थ चिल्लोका स्रोत जस्तो कि बदाम, गेडागुडीसँग केरा खाँदा शरीरलाई बढी फाइदा पुग्छ ।
रगतको ग्लुकोजमा यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यस अतिरिक्त दहीसँग केरा खाँदा पनि शरीरलाई धेरै राम्रो हुन्छ । विशेषगरी पाचन प्रणालीलाई यसले फाइदा मिल्छ ।
मानिसले दिनमा कति केरा खानुपर्छ भन्ने कुरा उसको शारीरिक क्रियाकलाप र रगतमा चिनीको मात्रामा केराले पार्ने प्रभावमा भर पर्छ । कडा परिश्रम गर्नेले बढी केरा खान सक्छन् । केही मानिसको रगतमा चिनीको मात्रा केरा वा अन्य फलप्रति बढी सम्वेदनशील पनि हुन्छ । एजेन्सी
उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू : के-के गर्न पाइदैन ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, कसको सरुवा कहाँ ?
आज रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ नियम लागू, अब के-के गतिविधि गर्न पाइने, के नपाइने ?
उपत्यकामा घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने (आदेशसहित)